GTranslate - Google Translate ကိုသုံးပြီးရိုးရှင်းတဲ့ WordPress ဘာသာပြန်ပလပ်ဂင် Martech Zone
GTranslate - Google Translate ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုး WordPress ဘာသာပြန်ပလပ်ဂင်
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ2ရက်၊ 2020 ခုနှစ် ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 18, 2021 Douglas Karr
အတိတ်တုန်းကငါaကိုသုံးဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည် စက်ဘာသာပြန်ချက် ငါ့ site ၏။ ကျွန်တော့် site ကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဘာသာပြန်ပေးဖို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခွင်မှာဘာသာပြန်သူတွေရှိချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုငါပြန်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ထိုအရာကကျွန်ုပ်၏ဆိုက်အကြောင်းအရာများကိုနိုင်ငံတကာတွင်မျှဝေခြင်းကိုသတိပြုမိသည် - လူအများအသုံးပြုနေကြသည် ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန် ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာကိုသူတို့၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ဖတ်ရန်။ ဒါက Google ဟာစက်သင်ကြားရေးနဲ့အတုထောက်လှမ်းမှုတွေကိုသုံးပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဘာသာပြန်ဟာလုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော့်ကိုအကောင်းမြင်စေတယ်။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ကိုသုံးပြီးဘာသာပြန်ပေးတဲ့ plugin တစ်ခုကိုထည့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ site ကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့ dropdown ထက်ပိုပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုခုချင်တယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနေဖြင့်ကြည့်ရှုစေလိုပြီးစွမ်းဆောင်ချက်နှစ်ခုလိုအပ်သည်။
metadata - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်ကိုတွားသွားသောအခါလိုချင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီအတွက်မတူညီသော URL လမ်းကြောင်းများရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းစီးအတွင်းရှိ tags များ။
URL ကို - WordPress အတွင်း၌ကျွန်ုပ်သည် Permalink များမှဘာသာပြန်ခြင်း၏ဘာသာစကားကိုလမ်းကြောင်းထဲထည့်သွင်းစေလိုသည်။
GTranslate WordPress ကိုပလပ်အင်
GTranslate ပလပ်အင်နှင့်ပူးတွဲပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဤအင်္ဂါရပ်များသာမကအခြားရွေးချယ်စရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
Dashboard - ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းအတွက်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုဒိုင်ခွက်။
စက်ဘာသာပြန်ခြင်း - လက်ငင်း Google နှင့် Bing အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း။
Search Engine အညွှန်း - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏ဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများကိုညွှန်းလိမ့်မည် လူများသည်သင်မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်ရောင်းသောကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
Search Engine Friendly URL များ - ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက်သီးခြား URL သို့မဟုတ် Subdomain ရှိပါစေ။ ဥပမာ: https://fr.martech.zone/.
URL ဘာသာပြန်ခြင်း - သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဘာသာပြန်ခြင်းကိုဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံသော SEO အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘာသာပြန်ထားသော URLs များကိုသင်ပြုပြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘာသာပြန်ထားသော URL ကိုသိရှိရန် GTranslate ပလက်ဖောင်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘာသာပြန်။ တည်းဖြတ်ခြင်း - ဘာသာပြန်များကိုစကားစပ်မှတိုက်ရိုက် GTranslate ၏ inline တည်းဖြတ်သူနှင့်ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်ပါ။ ဒါကတချို့အရာတွေအတွက်လိုအပ်တယ်။ ဥပမာ၊ ငါကုမ္ပဏီနာမည်ကိုမလိုချင်ဘူး၊ Highbridge, ဘာသာပြန်ထားသော။
တည်းဖြတ်ခြင်း - ဘာသာစကားအပေါ်အခြေခံထားသည့်လင့်ခ်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုအစားထိုးရန်သင်၏ဆောင်းပါးအတွင်းရှိ syntax ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဘာသာပြန်ထားသောကဏ္ translated ကိုမလိုချင်လျှင်၊ သင်သည်အတန်းအစားတစ်ခုထပ်ထည့်နိုင်သည် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း.
အသုံးပြုမှုစာရင်းအင်းများ - သင်၏ဘာသာပြန်အသွားအလာနှင့်ဘာသာပြန်အရေအတွက်ကိုသင်၏ဒိုင်ခွက်ပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
subdomain - သင်၏ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက်ဆပ်ဒိုမိန်းတစ်ခုရှိရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆာဗာအပေါ်အခွန်နည်းသောကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းကို URL လမ်းကြောင်းထက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ subdomain နည်းလမ်းသည်အလွန်မြန်ပြီး Gtranslate ၏ cached, ဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။
ဒိုမိန်း - ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားဒိုမိန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် .fr အထက်အဆင့်ဒိုမိန်းကိုသုံးလျှင် (tld) ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များပေါ်တွင်သင်၏ site သည်အဆင့်မြင့်နိုင်သည်။
ပူးပေါင်း - သင်တစ် ဦး ချင်းကိုလက်စွဲဘာသာပြန်ဖြင့်ကူညီလိုပါက GTranslate သို့ ဝင်ရောက်၍ လက်စွဲတည်းဖြတ်မှုများကိုထည့်နိုင်သည်။
သမိုင်းကိုတည်းဖြတ်ပါ - လက်စွဲတည်းဖြတ်မှု၏သမိုင်းကိုကြည့်ပြီးတည်းဖြတ်ပါ။
အသစ်ပြောင်းခြင်း - ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် updates များကိုဂရုစိုက်။ နေ့တိုင်းနောက်ဆုံးပေါ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်နှစ်သက်ပါသည်
ဘာသာစကားများ အာဘေးနီးယန်း၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘစ်စကီ, ဘီလာရုစ်, ဘင်္ဂလီ, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား, ကက်တလန်, Cebuano, ချီချီဝါ, တရုတ် (ရိုးရှင်းသော), တရုတ် (ရိုးရာ)၊ အက်စ်ပရန်တိုနစ်, အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဖရီစီနစ်စ်၊ ဂါလီရှန်၊ ဂျြောဂြီယန်၊ ဂျာမန်၊ ဂရိ, ဂူဂျာရီးယား, ဟာအီတီယန်, ဟာဝိုင်ယီ, ဟီဘရူး၊ ဟိန္ဒူ၊ လာဒင်၊ လက်တင်၊ လက်ဘီယံ၊ လစ်သူရေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မာစီဒီးနီးယား၊ မလေးရာလမ်၊ မလေးရာလမ်၊ မလေး၊ မော်လ်တာ၊ မော်ရီ၊ မာရီယို, မွန်ဂို, မြန်မာ (ဗမာ)၊ နီပေါ၊ နော်ဝေ၊ ပါရှနျ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပန်ချာပီ၊ ရိုမေးနီးယား, ရိုမေးနီးယား, ရုရှန်, ဆားဗီးယား, Shona, ဆက်တိုတို, စင်ဒီ, ဆင်ဟာလ, စလိုဗက်ကီးယား, ဆလိုဗေးနီးယား၊ ယူကရိန်း၊ အူဒူ၊ ဥဇဘတ်ခ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဝလေ၊ ဇိုစာ၊
GTranslate ၁၅ ရက်စမ်းသပ်မှုအတွက်စာရင်းသွင်းပါ
GTranslate နှင့် Analytics မှ
အကယ်၍ သင်သည် GTranslate အတွက် URL လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်၏ဘာသာပြန်ထားသောလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံရာတွင်မည်သည့်ပြintoနာများမှသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင် subdomain များမှအလုပ်လုပ်နေပါက၎င်း traffic ကိုဖမ်းရန် Google Analytics (နှင့်သင်အသုံးပြုနေပါက Google Tag Manager) ကိုစနစ်တကျ configure လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရှိတယ် ဒီ setup ကိုအသေးစိတ်ကြီးစွာသောဆောင်းပါး ဒါကြောင့်ငါကဒီမှာကထပ်ခါတလဲလဲမသွားဘူး။
Google Analytics ထဲမှာ၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုဘာသာစကားနဲ့ခွဲချင်ရင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အလယ်တန်းအတိုင်းအတာအဖြစ် hostname ထည့်ပါ subdomain ဖြင့်သင်၏ traffic ကို filter လုပ်ရန်။
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် GTranslate.
Tags: ဘင်ဘာသာပြန်ဘာသာပြန်ဆို googleကွမ်းခြံကုန်းစက်ဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ချက်WordPresswordpress plugin ကိုwordpress ဘာသာပြန်ချက်wordpress ဘာသာပြန်ပလပ်အင်
ရက်သတ္တပတ်၏နေ့အားဖြင့်လူမှုရေးအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစီစဉ်ရန် Excel ဖော်မြူလာ
Instapage - သင်၏ All-In-One PPC နှင့် Ad Campaign ကမ်းလှမ်းခြင်းစာမျက်နှာဖြေရှင်းချက်